Inkumbulo ephelele. UDavid Baldacci uqala uchungechunge olusha. | Izincwadi Zamanje
Inkumbulo ephelele. UDavid Baldacci uqala uchungechunge olusha.
UDavid Baldacci udala umlingiswa omusha ku- Inkumbulo ephelele.
Esikhathini esingengakanani esedlule bengikhuluma UDavid Baldacci futhi i inoveli yesibili kusuka ku-trilogy yakhe mayelana ne-ejenti uJohn Puller. Cishe ngasikhathi sinye lesi sihloko esisha sashicilelwa, Inkumbulo ephelele, lapho umlobi waseMelika aqala khona olunye uchungechunge oluthembisayo. Mkhulu lohlobo futhi uzala kakhulu, imibono yakhe namacebo akhe kubonakala kungapheli.
El protagonista ukuthi usethula kuhluke ngokuphelele kwi-super-agent Puller, isibonelo cishe seqhawe. Ebusheni bakhe, U-Amos Decker ulimala kabi kakhulu. Kusukela lapho kuzoba i-hyperthymesic futhi-ke ngeke kuphinde kufane. Kepha unayo usizi olubi kakhulu. Nakhona indaba yokuthi ifunda idonse umoya.
1 Imayelana nani
3 Kungani uyifunda
U-Amos Decker wayekuphela kwensizwa yaseBurlington, idolobha lakubo, ukuba abe ngumdlali webhola oqeqeshiwe. Kepha umsebenzi wakhe waphela ungakaqali. A ukushaya okunodlame ekhanda ngokumelene nalokho kwesimbangi kwamshiya ecishe wafa futhi wamsusa emdlalweni unomphela. Kepha futhi kumshiye enemiphumela ethile: hyperthymesia (angakhohlwa lutho) kanye ne- synesthesia (bheka ngemibala).
Eminyakeni engamashumi amabili kamuva, uyahlupheka inhlekelele enkulu. Kuyinto umhloli wamaphoyisa futhi lapho ebuyela ekhaya ngobunye ubusuku uthola wabulawa umlamu wakhe, unkosikazi wakhe, indodakazi yakhe. Ukuhlukumezeka kukhulu kangangokuba uDecker ushiye amaphoyisa, angene ekucindezelekeni okukhulu futhi alahlekelwe yikho konke, kubandakanya nendlu yakhe. Cishe uhlala entulayo, uthola kancane ngokuthatha imisebenzi ethile njenga umphenyi wangasese.
Kepha ngaphezulu konyaka, indoda ezinikele Emaphoyiseni futhi uyavuma ukuthi ungumbhali wamacala. Ngesikhathi esifanayo, ukubulawa ngesihluku kwabafundi nothisha esikoleni esiphakeme saseBurlington. Umphathi wangaphambili kaDecker uzokucela ukuthi uhlanganyele nabo. UDecker naye ubona ithuba lokuthola ukuthi kwenzekeni ngempela emndenini wakhe.
Njengoba kuphela, kubonakala kimi lokho U-Amos Decker Ngeke abe kuphela kwe-protagonist yochungechunge, kepha impela uyinto ethakazelisa kakhulu. Mude kakhulu, u-burly, unentshebe futhi ukhuluphele kakhulu. Eminyakeni engamashumi amane nambili, ubukeka emdala ngeminyaka eyishumi, njengoba esho, ngokuyeka ukunakekela usizi abhekane nalo. Ngezikhathi ezithile umlandisi womuntu wesithathu uxubeka nezwi lakho kumuntu wokuqala futhi usisondeza kuye.
Amakhono akhe awatholile, njengokuhluka kwe- isifo se-savantism, kuthinte nokuziphatha futhi, ngandlela thile, ulahlekelwe uzwela. Cishe futhi ulahlekelwa yintando yokuphila futhi simbona ecabanga nge ukuzibulala ezikhathini ezimbalwa. Ngamanye amagama, kithina esinendawo ethambile yabalingiswa abalimele, u-Amos Decker ungomunye wethu amaqhawe efanele ukunakwa. Ushaya phansi edwaleni, kepha njenganoma imuphi umlingiswa omuhle othintwe yidrama, uhlobo oluningi, sizolwela ukufuna ukuhlengwa. Futhi ngokuqinisekile liyakubamba.
Naye, owayengumlingani wakhe, umphenyi Lancaster, futhi ifekethise izici zesibili zokunethezeka, ezithembekile nezinesibindi. Futhi bayajoyina umphathi oqondayo shift, umenzeli we-FBI nobani uDecker azoba nama-pluses nama-minus akhe, kepha ekugcineni uzokwakha iqembu elihle. Y intatheli ongena ngesigameko, adonswe ubuntu bukaDecker nokuxhumana phakathi kwenhlekelele yakhe kanye nesibhicongo saseBurlington High School.
Ngoba uBaldacci uyayazi kahle ifomula lempumelelo futhi lapha uyenza ukuthi iphinde isebenze. Ukuhamba ngesivinini esisheshayo nesakhiwo esihle ngegiya elakhiwe kahle. Futhi a umbulali wokuqala, Imiyalezo yabo eya kuDecker igcina ukungabaza futhi kuyamangaza baze bathole ukuxhumana phakathi kwabo bonke.
Uma kufanele ngibeke Pero, Kungaba yilokho Bengifuna okwengeziwe. Ukuthi yena ukugcina Ngizoba okhubazekile ngandlela thile, ngibe nomuzwa wokuthi gijima futhi. Kepha uma kungenjalo, ukufunda kulula, kuyinoveli kuyajabulisa kakhulu Sengivele ngamukela u-Amos Decker njengomunye wabalingiswa engibathandayo bonyaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Inkumbulo ephelele. UDavid Baldacci uqala uchungechunge olusha.
USterling Hayden. Umlingisi ophawuliwe, itilosi kanye nomlobi.
I-Decalogue yombalisi wezindaba ophelele, nguHoracio Quiroga